Yintoni umehluko phakathi amalungelo i-american kwaye Isitshayina abemi. Quora - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Yintoni umehluko phakathi amalungelo i-american kwaye Isitshayina abemi. Quora
E-United States, siseko amalungelo ingaba uluhlu zinto ukuba urhulumente akanako ukwenza kuweNgokuqhelekileyo, awukwazi invoke uvumelekile ukuba wenze imbambano phakathi u private amaqela. Umzekelo, ukuba inkampani yabucala ityhila umntu ulwazi malunga nawe, awunokwazi sue nabo kuba infringing kwindlela yakho-siseko amalungelo, ukususela kwi-US-siseko amalungelo involve kuphela interactions phakathi kwenu kwaye urhulumente.
NATHI imithetho emphasize 'thabatha amalungelo' (oko kukuthi, urhulumente andinaku ingaba X kuwe) kwaye hayi 'dibanisa amalungelo' (oko kukuthi urhulumente kufuneka ukuba uza kukubonelela nge-Y). Kwi-PAPER ingcamango ka-ilungelo ibandakanya zonke isemthethweni budlelwane nabanye eziquka hayi kuphela budlelwane nabanye phakathi urhulumente kwaye umntu, kodwa kanjalo phakathi private abantu.
Ngoko ke, ukuba umntu smashes yakho window, ubuya sue nabo kuba ukwaphulwa komthetho ilungelo lakho ukuba ipropati, kwaye ukuba kunjalo ekugqibeleni ngu grounded kwi-PAPER-siseko.
Paradoxically, China kubalulekile harder ukuba enforce ilungelo ngokuchasene urhulumente, ngenxa imfundiso 'state inzala' kwaye 'uluntu umyalelo. Ngoko ke yomgaqo-siseko amalungelo ingaba ngakumbi ibalulekile ordering ubudlelwane phakathi non-imo abantu kunokuba phakathi urhulumente kwaye umntu.
Phantsi Isitshayina-siseko kufuneka ilungelo free intetho, kwaye ukuba private umntu infringes kwindlela yakho ilungelo free intetho, uyakwazi sue nabo kuba oko.
Ukuba urhulumente ukuxelela ukuba ukuvala phezulu, kukho kakhulu olomeleleyo odds ukuba iinkundla uya kulawula ukuba urhulumente unelungelo ukwenza njalo phantsi 'state inzala. Kwi-KWETHU, esisebenza enye indlela, uyakwazi sue urhulumente ukunqanda violations Wokuqala Sihlomelo, kodwa Kuqala Indawo ligama irrelevant ukuba ufaka nomngeni nge private umntu. Ukunika umzekelo umahluko Ukucinga mna ngeposi umyalezo kwi Isitshayina bulletin ibhodi, kwaye ngaphaya koko, efumana erased. Ndinako ke sue kwi emidlalo ukuba wam amalungelo free intetho zithe violated Ngoku icace phandle ukuba ke ngumnini-bulletin ibhodi ukuba erased wam ngeposi, banako ibango ukuba zabo ilungelo ipropati ukuqhuba ngaphezulu wam ilungelo free intetho.
Ukuba kubalulekile ukuba urhulumente, ngoko ke urhulumente unako ibango 'state inzala' kwaye ukuba ukuqhuba ngaphezulu wam ilungelo free intetho.
Ngoku ukucinga, mna ngeposi umyalezo kwi bulletin ibhodi, kwaye icace phandle ukuba umntu ukuba erased yayiyeyona umqhekezi ukuba waphula kwi abancedisi. Ukuba bekuzakufuneka sue ukuba umqhekezi, izakuba kuba violating wam ilungelo free intetho. I-umqhekezi erased wam ngeposi, violated wam ilungelo free intetho, ndinako kufuna imbuyekezo. Azinazo naziphi na ipropati amalungelo, okanye ngabo kwimo esemthethweni Ngoku i-i-american ukukuthetha, ithetha ntoni le uyenze nge ekunene free intetho, kwaye lowo izakuba echanekileyo phantsi i-american umthetho. Phantsi KWETHU umthetho, ndinga sue i-umqhekezi kuba umonakalo othe, kodwa mna wouldn khange sue nabo kuba violating wam free intetho amalungelo (izakuba mhlawumbi kuba tortious kokuphazamiseka). Kwi-NATHI inkqubo esemthethweni, ilungelo free intetho usebenza isimo inyathelo, kwaye irrelevant ukuba private abantu bamele obandakanyekayo. Omnye nto kuwazisa apha kukuba zonke nezomthetho kuba ukusombulula iingxaki ezithile ukuze kwi end, ndinga kwazi ukuzenza into umqhekezi. Kwinqaku kukuba ndinga sebenzisa i-hluke kakhulu isemthethweni inkumbulo ukuyenza. Esithi 'kulungile kukho ayi na umahluko ngenxa yokuba kukho into engalunganga bekuya kwenzeka ukuba umqhekezi' unje esithi kakuhle akukho umahluko phakathi isijamani ukutya kwaye isi-Italian ukutya ngenxa yokuba bonke ziqulathe protein kwaye bayigcine kwenu ukususela starving. Enye into yokuba abantu e-United States get ezingachanekanga kukuba babe alenze ukuba kubalulekile umahluko kukuba phakathi 'lwentando yesininzi' kwaye 'dictatorship' ngoko ke baya musa baqonde ukuba uyakwazi ukuqhuba a lwentando yesininzi kunye concepts ukuba ingaba hluke kakhulu kunokuba i-american okkt. China ayiyo lwentando yesininzi, kodwa Sasejamani kwaye France ngabo, kwaye ezinye neeyantlukwano phakathi KWETHU ne-China, ingaba isixhosa isijamani neeyantlukwano kunokuba lwentando yesininzi dictatorship okkt. Ke kuyinyaniso ukuba China kuyakhusela umntu amalungelo ngaphantsi Entshona Yurophu okanye i-United States.
Phantsi Isitshayina umthetho (apho kwakhona ivela Sasejamani), i-esemthethweni unako ngaphezulu amalungelo akho kwi emidlalo 'state inzala' okanye '- wonke ukuze' kwaye Isitshayina umthetho interprets 'preserving i-socialist indlela' (oko kukuthi ngokugcina omnye umntu system) xa legitimate urhulumente inzala.
Ngelo elinye ixesha oku akuthethi ukuba kuthetha ukuba Isitshayina abemi kuba akukho amalungelo, okanye ukuze urhulumente zonke-zinamandla. Umzekelo, ukuba Isitshayina olusemthethweni yaye into yokuba waba ngokucacileyo 'personal' kwaye hayi sanctioned ngumthetho, ungakwazi kwi-inkumbulo, kwaye surprisingly enkulu inani iimeko enyanisweni ingaba kukho into malunga nayo ngokusemthethweni. Enye umahluko ufumana amalungelo ngu ngenxa KUTHI amalungelo bakholisa ukuba abe thabatha kwaye involve i urhulumente, abo bakholisa ukuba abe kakhulu elililo. Kukho izinto umzekelo, NATHI urhulumente unako zange kukwenza phantsi Kuqala Sihlomelo, kwaye kukho ezinye iindawo apho unako argue ukuba 'free intetho' elililo, kwaye uyakwazi construct abanye explicit imigaqo malunga into urhulumente unako ungaze wenze. Ngoba, Isitshayina-siseko sele amalungelo (ukutsho oko kufuneka ilungelo lokufumana imfundo kwaye unelungelo umsebenzi), awunokwazi yenza imizekelo umthetho ezisekelwe kwindlela yokusebenza kuba enforcing ilungelo umsebenzi okanye ilungelo lokufumana imfundo. Ngoko ke, i-China ingaba oku kulawula ukuba lomgaqo-siseko amalungelo asingawo ngqo judiciable. Oko nje wouldn ukuba umsebenzi othile ukuya enkundleni kwaye ndithi 'mna banelungelo umsebenzi, kufuneka ndinike umsebenzi.
Ngoko ke kwi-Isitshayina-sikhokelo, kwindlu yowiso-mthetho yephondo yenza isigqibo malunga njani enforce amalungelo, kwaye-siseko amalungelo ingaba kakhulu ngaphantsi elililo (ewe, ube unelungelo umsebenzi, uxolo ufuna unemployed, sizimisele ukusebenza ngomhla ingxaki).
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba sikhokelo usebenza ezopolitiko amalungelo, wena end phezulu kunye abangaphantsi protections kwi free intetho.
Indlela Asebenza Inkqubo kwi-China - Hague Umthetho Hetalia